AMISOM oo sheegtay inay fashilisay weerar 3 geesood oo Al-Shabaab soo qaaday - Jowhar Somali Leader
Home Somali AMISOM oo sheegtay inay fashilisay weerar 3 geesood oo Al-Shabaab soo qaaday
AMISOM oo sheegtay inay fashilisay weerar 3 geesood oo Al-Shabaab soo qaaday
War saxaafadeed ka soo baxay Howlgalka AMISOM ayaa lagu sheegay inay fashiliyeen weerar dhowr jiho ah oo Al-Shabaab ku soo qaaday Ciidanka Jubbaland ee ku sugan deegaanka Bilis Qooqaani ee Gobolka Jubadda Hoose.
AMISOM ayaa sheegtay in dagaalka ay dib kaga biireen ciidankooda, lana fashiliyay weerarka Shabaabka, ayna ka jireen xubno ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab, laguna soo qabtay dagaalamayaal kale oo aan tiradooda la sheegin.
Sidoo kale AMISOM ayaa sheegtay in weerarka Al-Shabaab uu ahaa mid saddex geesood ah, ayna gacanta ku dhigeen qoryo Ak47 iyo rasaas.
Madaxa AMISOM ahna Wakiilka Midowga Afrika ee Soomaaliya Amb. Francisco Madiera ayaa ku boggaadiyay kaalinta Ciidanka ka qaateen soo afjarida weerarkaas, gaar ahaan Ciidanka Kenya ee qeybta ka ah howlgalka AMISOM ee saldhigooda yahay degmada Dhoobley.